पकाउने मा जडिबुटी thyme
पुरातन समयमा समेत यो को निको गुण लागि ज्ञात थियो thyme (thyme)। यसरी, यो निको पार्न प्रयोग गर्न सकिन्छ airway रोग, तन्त्रिका र musculoskeletal प्रणाली, छाला, पाचन अंगहरु, मौखिक गुहा र धेरै अन्य थियो। साथै, यो बोट जीवाणुरोधी, रोगाणुरोधी, antiparasitic, निस्संक्रामक र analgesic गुण छ। यसको संरचना यो बोट थप र comprises आवश्यक तीतो तेल, र टेन्निसको, राल, गम, साथै भिटामिन, जैविक र खनिज लवण भएकोले thyme अक्सर प्रयोग विभिन्न व्यञ्जन लागि मसला रूपमा खाना पकाउने मा। यसलाई यो तीव्र पाचन पर्याप्त फैटी खाद्य पदार्थ योगदान भन्ने तथ्यलाई कारण छ। त्यसैले, यो पोर्क, pâté, पाठो, तेल माछा, कुखुरा र offal व्यञ्जन को तयारी मा प्रयोग गरिन्छ।
Thyme बलियो मसालेदार गन्ध र धारिलो तीतो स्वाद छ। यो ताजा खाना पकाउने मा thyme प्रयोग गर्न बेहतर छ, तर आज यो झन् कठिन बन्ने छ, त्यसैले अक्सर बोट को सुकेको पात प्रयोग गर्नुहोस्। यस मामला मा, यो सुक्खा thyme एक धनी स्वाद छ सम्झना हुनुपर्छ, त्यसैले यो धेरै कम हुनेछ। यसलाई पकाउने बन्दागोभी र आलु, सूप, फलियां, अन्डा र पनीर, कुखुरा, सस र marinades को शोरबा लागि प्रयोग गरिन्छ रूपमा thyme पात, को पाक उद्योग मा सबै भन्दा साधारण मसला हो, माछा (तरकारी नुनीन बनान समयमा विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ), र विभिन्न पेय र चाय।
शुद्धता भने गर्न सक्नुहुन्न संग हुन, को thyme के प्रतिस्थापन गर्न सक्छ, किनभने यसको अद्वितीय स्वाद र औषधीय गुण संसारभरि शेफ प्रयोग कुनै पनि अन्य बिरुवाहरु संग छैन तुलना गर्न सकिन्छ। तसर्थ, पात डिब्बाबंद खाना र मादक पेय थपिएका छन्, र stems - पेय को एक किसिम मा। तर हेरविचार पेट, कलेजो वा अन्तस्करणले को रोगहरु बाट ग्रस्त गर्नेहरूका लागि यो प्रयोग गर्न लग्नु गर्नुपर्छ।
के रोचक छ त्यहाँ thyme धेरै प्रजातिहरू छन् भन्ने छ। उदाहरणका लागि, जीरा Thyme जान्छ राम्रो रक्सी, लसुन र माछा संग (यो भू-मध्य भोजन मा प्रयोग गरिन्छ किन जो छ), र कागति thyme - समुद्री भोजन र मिठाई को एक किसिम संग। बिरुवाहरु को विविधता भए तापनि यसलाई सधैं फ्रान्सेली भोजन, साथै स्पेनिश, ग्रीक र टर्की मा प्रयोग गरिन्छ। र फ्रान्सेली भोजन शेफ thyme प्रतिस्थापन गर्न के कुनै विचार छ, त्यसैले यो मसला यहाँ एक विशेष ठाउँ छ।
तयार भोजन मा thyme थप्दा (विशेष गरी जब मरिच संग संयुक्त), बलियो र आफ्नो स्वाद र सुगन्ध सुधार गर्न योगदान गर्न सक्नुहुन्छ। तर, आफ्नो पूर्ण स्वाद पुग्न यो लामो समयसम्म गर्मी उपचार गर्न मद्दत गर्छ, त्यसैले thyme को सबै भन्दा यसको तयारी को सुरुमा एक पकवान राख्नु भएको छ। को सूप र पहिलो व्यञ्जन मसला पकाउने अन्त अघि बीस मिनेटमा राख्नु भएको छ।
यो अक्सर प्रयोग गरिन्छ शाकाहारी thyme खाना पकाउने मा। तसर्थ, मसला पनीर, तरकारी, मशरूम, अन्डा र omelets, जेली र धेरै अन्य व्यञ्जन थपिएको छ।
यो ताजा जडीबुटी एक कस बन्द कन्टेनर मा स्वाद र सुगन्ध र मसला स्टोर संरक्षण बस उपयोग गर्नु भन्दा पहिले जमीन छन् मनमा सार्ने गर्नुपर्छ।
तसर्थ, आधुनिक समयमा अक्सर पकाउने मा thyme प्रयोग गर्नुहुन्छ, तर यसको औषधीय गुण बारे मा भूल छैन। यसरी, यो ट्याब्लेट र खोकी मिश्रण, स्नायु विकार देखि, र को निर्माण मा चिकित्सा प्रयोग गरिन्छ घाउ निको लागि nanodiamonds उपयोग गरदै। यसको जीवाणुरोधी गुण यसको संरचना भित्र कारण thyme आवश्यक तेल छ। त्यसैले, तपाईं बस बोट को ताजा पात हातमा, अक्सर coughing उचित छ भने RUB र गंध श्वास फेर्न सक्नुहुन्छ। तर हामी यो हृदय, अन्तस्करणले र कलेजो, पेट को रोगहरु बाट ग्रस्त गर्नेहरूलाई यो बोट प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छैन सम्झनुपर्छ। तपाईं पनि thyme सक्रिय योगदान रूपमा थाइरोइड समारोह बृद्धि गर्भवती महिला को आहार देखि यो बहिष्कार गर्नुपर्छ।
छिटो र स्वादिष्ट खाजा: पनीर र ससेज संग सैंडविच
Multivarka मा Kharcho - छिटो र स्वादिष्ट
तरकारी र मसला संग crumbly,: कसरी garnish लागि चामल पकाउन गर्न
घरमा Ciabatta। पकाउने व्यञ्जनहरु
कसरी नियम अनुसार कस्टर्ड बनाउन
को capelin कसरी खाना पकाउनु?
प्राचीन ग्रीस र मिश्रको मृत्युको देवता
प्रयोगको लागि 'Hilak गुण' निर्देशन
माछा सस: नुस्खा
विस्तार माटो संग तल्ला screed: सबै प्रविधि
तपाईं पहिलो पटक यहाँ भने कहाँ, Yaroslavl जाने
एंटीबायोटिक्स पछि शरीर कसरी बहाल गर्ने? सुझावहरू र ट्रिक्सहरू
मानिसहरूमा विकिरणको जैविक प्रभाव
उधारकर्ता को creditworthiness मूल्याङ्कन लागि रन मोडेल
आनन्द नजिकै हुनुहोस्
Pseudomonas संक्रमण। Pseudomonas aeruginosa (Pseudomonas aeruginosa)
फूल र गैर-फूल घरघर